करोडौँ मुल्य पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको कब्जामा बिहिबार, ०५ मङि्सर २०७६ गते प्रकाशित -
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको विभिन्न महत्वपुर्ण क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको छ । सरकारी जग्गा कब्जा गर्न समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । करोडौँ मुल्य… बाँकी »
माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा निशुल्क कम्प्यूटर तालिम सञ्चालन हुने, यस्तो छ तयारी
शिखरपोष्ट रिपोर्टर सोलुखुम्बु । माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाले वाकु भिजन नेपालसँगको सहकार्यमा निशुल्क कम्प्यूटर तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा २०/२० जनाको सहभागिता हुनेगरी सातै वडामा उक्त कम्प्यूटर… बाँकी »
काठमाडौं । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा बिहीबार बिहान आयोजित एक समारोहका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त ६ मन्त्रीलाई शपथ गराएकी हुन् ।… बाँकी »
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन, को को भए नयाँ मन्त्री ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका छन् । उनले केही मन्त्रीलाई हटाएका छन् भने केहीलाई नयाँ नियुक्त गरेका छन् । बुधबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको… बाँकी »
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका केन्द्र मुक्ली हुँदै देउसा जोड्ने करिब ४१ कि.मि. ट्र्याक ओपन कार्य सम्पन्न
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत पन्चन, कांगेल, गाउँपालिकाको केन्द्र मुक्ली हुँदै देउसा ७ र ८ लाई जोड्ने करिब ४१ किलोमिटर सडक ट्र्याक ओपन कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त सडकको उद्धघाटन गाउँपालिका प्रमुख… बाँकी »
प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, ओली पाँच वर्षलाई नै प्रधानमन्त्री
काठमाडौं, ४ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको छ । साथै अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको यो… बाँकी »
4 / 425« Previous12345678910Next »